Safiirkii Kenya oo soo gaaray Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Safiirkii dowladda Kenya u fadhiyay Soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Safiirka dowladda Kenya ufadhiya Soomaaliya Amb. Lucas Tumbo ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, waa tallaabadii u horeysay ee Kenya u qaadday soo celinta xiriirkii diblomaasiyadda iyo dib u furida Safaaradeeda Muqdisho muddo lix bil kaddib oo labada dal ay Safaaradaha kala rarteen.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in sida ugu dhaqsiyaha badan Safaaradeeda dib uga fureyso magaalada Muqdisho, iyadoo ku marti-qaadday Safiirka Soomaaliya ee Kenya inuu dib ugu soo laabto Nairobi, dibna u bilaabo shaqadiisa.
14 -kii bishan ayey soo saartay Kenya War-murtiyeed ay ku sheegeyso in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ufureyso Safaaraddeeda Soomaaliya ay ku laheed taasoo albaabada la isugu dhuftay markii dowladda Soomaaliya ay xiriirka ujartay Kenya, kuna amartay Safiirkii Kenya inuu dalkiisa ku laabto.
Muran siyaasadeedka ka dhaxeeya Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta waxa uu gaaray meel sare, waxaana joogsaday xiriirkii ganacsi ee Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo dalka oo dhan laga mamnuucay Qaadkii la keeni jiray Soomaaliya ee ka imaanayay Kenya.
Ergada Diblomaasiyiinta Soomaaliya ayaa la filayaa in maalmaha soo socda dib laabtaan Nairobi, si ay iyagana dib uga furaan Safaaradda, loona bilaabo howlihii diblomaasiyad ee ay hayeen kahor inta uusan xumaan xiriirka labada dal.